महिलाहरु पुरुषको यस्ता कुराप्रति आकर्षित हुन्छन् ! – SN-One of the top news portal in Nepal, Trusted news …
महिलाहरु पुरुषको यस्ता कुराप्रति आकर्षित हुन्छन् !
एजेन्सी २०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार १८:१९ मा प्रकासित
महिलाहरूमाथि गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्षमा महिलाहरू पुरुषहरूको अनुहारलाई भन्दा व्यवहारलाई नोटिस गर्छन् ।
महिलाहरू कुन कुराले प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै पुरुषहरू जान्न चाहन्छन् । कसैलाई लाग्छ, महिलाहरू पैसा र प्रसिद्धिबाट प्रभावित हुन्छन् । कसैको विचारमा महलिाहरू पुरुषको अनुहार तथा फिटनेसलाई बढी महत्व दिन्छन् । यस्तो सोच छ भने त्यागौं है पुरुष मित्रहरू, अध्ययनले भन्छ(महिलाहरू पुरुषहरूको हाउभाउ, स्टाइल म्यानर्स एवं परिपक्वताबाट प्रभावित हुन्छन् ।
वास्तविकता के छ त ?
महिलाहरू पुरुषले आफ्नो साथी, परिवार एवं आफन्तजनसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा नोटिस गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पुरुषले आफ्नो परिवार तथा साथीसँगीप्रति प्रेम, सद्भाव तथा आदर प्रदर्शित गरे भने उनीहरू प्रभावित हुन्छन् ।
महिलाहरू पुरुषको इमानदारिता मन पराउँछन् । आफूसँगै हिँडेका बेला पुरुष पार्टनरले अरू महिलालाई एकोहोरो हेरेको कुरा महिलाहरू पटक्कै रुचाउँदैनन् । यस्तो व्यवहार देख्दा उनीहरूको मनमा नकारात्मक छाप बस्छ । उनीहरू पुरुष साथीबाट सम्बन्धमा इमानदारीको अपेक्षा गर्छन् ।
परिपक्वतालाई महिलाहरू धेरै महत्व दिन्छन् किनभने उनीहरू पुरुषहरूको समझदारीप्रति आकषिर्त हुन्छन् । महिलाहरू भावनात्मक रूपले कमजोर पुरुषलाई रुचाउँदैनन् ।
एक अध्ययनअनुसार महिलाहरू पुरुषको शारीरिक बनावटमा पनि ध्यान दिन्छन् । उनीहरू शक्तिशाली व्यक्तिप्रति शारीरिक रूपले आकषिर्त हुन्छन् । अध्ययनअनुसार महिलाहरू सामान्य पुरुषलाई भन्दा हृष्टपुष्ट पुरुषलाई बढी रुचाउँछन् । यसका साथै पुरुषहरूको आक्रामक स्वभावबाट पनि धेरैजसो महिला तानिन्छन् ।
आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने पुरुषहरू महिलाको रोजाइमा पर्छन् । यताउति आँखा डुलाएर घुमाइफिराइ कुरा गर्ने तथा कुराकानीका क्रममा महिलाको कम्मर, स्तन तथा जाँघतिर हेर्ने पुरुषलाई रुचाउँदैनन् । महिलाहरू यस्ता पुरुषसँग धेरैबेर कुरा गर्न चाहँदैनन् ।
महिलाहरू देखावटी मन पराउँदैनन् । आफ्नो हैसियत उच्च छ भन्ने देखाएर महिलालाई प्रभाव पार्छु भनेर कुनै पुरुषले सोच्छ भने त्यो गलत हो । वास्तविकता के हुन्छ भने धेरैजसो महिला त्यस्ता पुरुषहरूबाट सकेसम्म टाढिन खोज्छन् ।
भाइरल बन्यो शिशु र महिलाको गुप्तांग देखिने यो तस्बिर
जापानमा एउटा सानो शंखेकिराले २६ ट्रेन ठप्प पारिदियो, १२ हजार यात्रुलाई ढिलाइ
सैफ अली खानकी सासू, जसलाई देखेर खाली हुन्थ्योे बस्ती, भाग्थे पुरुष
सुसाइट नोट लेखेर ११ वर्षीय बालकले गरे आत्माहत्या
होसियार ! चाउमिनको सस खाँदा एक बालकको फोक्सो फुटियो
नाममा यी अक्षर दोहोरिएका व्यक्तिहरु हुन्छन् साह्रै भाग्यमानी
रौतहट प्रहरी भ्यान दुर्घटना: गम्भीर घाइते २ कैदीको मृत्यु
हेर्नुहोस तपाइको राशिफल: वि.सं. २०७६ असार ११,बुधबार,यी राशिलाई फाइदै फाइदा
दाङमा चट्याङ लागेर तीन बालबालिकाको मृत्यु
मलेसियामा रक्सी खाएर नेपालीद्वारा नेपालीमाथि नै चक्कु प्रहार
भारतमा बस दुर्घटना : ६ को मृत्यु ४५ घाइते